Imfihlo yakho ibalulekile kuthi. Umgaqo-nkqubo weLizwi.to ukuhlonipha ubumfihlo bakho ngokubhekisele kulo naluphi na ulwazi esinokuluqokelela kuwe kwiwebhusayithi yethu, https://word.to , nakwezinye iisayithi esinazo nesisebenza kuzo.
Sifuna kuphela ulwazi lomntu siqu xa silufuna ngokwenene ukuba sikunike inkonzo. Siqokelela ngendlela enobulungisa nesemthethweni, ngolwazi lwakho kunye nemvume. Sikwazisa ukuba kutheni siqokelela kunye nendlela eza kusetyenziswa ngayo.
Sigcina kuphela ulwazi oluqokelelweyo okokoko kufanelekileyo ukukunikezela ngenkonzo oyifunayo. Yeyiphi idatha esiyigcinayo, siza kuyikhusela kwiindlela ezamkelekileyo zentengiso zokuthintela ilahleko nobusela, kunye nokufikelela okungagunyaziswanga, ukuveza, ukukopa, ukusetyenziswa okanye ukuguqulwa.
Asabelani nabanye ngolwazi oluchaza esidlangalaleni okanye nabantu besithathu, ngaphandle kwaxa kufunwa ngumthetho.
Iwebhusayithi yethu inokunxibelelana neendawo zangaphandle ezingasebenziyo kuthi. Nceda uqaphele ukuba asinakulawula umxholo kunye nezinto ezenziwayo kwezi ndawo, kwaye asinakho ukwamkela uxanduva okanye uxanduva kwimigaqo-nkqubo yabucala.
Ukhululekile ukusala isicelo sethu solwazi lwakho, uqonde ukuba singangabinako ukukunika ngeenkonzo ozifunayo.
Ukusetyenziswa kwakho okuqhubekayo kwewebhusayithi yethu kuya kuthathwa njengokwamkelwa kwezenzo zethu malunga nemfihlo kunye nolwazi lomntu. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nendlela esiyiphatha ngayo idatha yomsebenzisi kunye nolwazi lomntu siqu, zive ukhululekile ukunxibelelana nathi.
Iifayile ezilayishiwe ziyacinywa emva kweeyure ezimbini kwaye iifayile eziguqulweyo ziyasuswa emva kweeyure ezingama-24. Ukuthintela uxhatshazo, singena kwidilesi ye-IP eguqulweyo xa ifayile iguqulweyo, akukho manyano kwiifayile nakwidilesi ye-IP. Emva kweyure enye idilesi ye-IP iyacinywa kwaye isimahla ukwenza olunye uguquko.
Lo mgaqo-nkqubo usebenza ukususela nge-6 Juni 2019.
34,014 Uguquko ukusukela ngo-2020!
Yenziwe ngu nadermx - © 2020 Word.to